Mapurisa Orambidza MDC Kuita Musangano Wayo muHarare
Kurume 17, 2011
Bato reMDC inotungamirwa nemutungamiri wehurumende, Va Morgan Tsvangirai, raendesa mapurisa emuHarare kumatare neChina nepamusana pekurambidzwa kunonzi kuri kuitwa bato iri nemapurisa kuita misangano yaro. Izvi zvinotevera kuramba kwaita mapurisa kuti MDC ienderere mberi nekuita musangano nevatsigiri vayo uyo wanga wakatarisirwa kuitwa mu Harare neMugovera.
Mutauriri weMDC mupurovhinzi yeHarare uye vari mumiriri weKambuzuma muparande, Va Willias Madzimure, vaudza Studio7 kuti mapurisa ari kuvarambidza kuenderera mberi nemusangano wavanga vachida kuita pa Glamis muHarare. VaMadzimure vati vafamba kunzvimbo dzakawanda muHarare vachitsvaga nzvimbo yokuitira musangano asi mapaurisa achivaudza kuti Zanu PF yainge yatobhuka kare kunyange hazvo vachiti mabhuku ekanzuru anoratidza kuti hapana akabhuka nzvimbo idzi kuti paitwe misangano.
VaMadzimure vati vakwidza nyaya iyi kudare repamusoro nechinangwa chekuti vapihwe mvumo yokuita musangano nevatsigiri vebato ravo paGlamis musi weMugovera.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa mupurovhinzi yeHarare, Inspector James Sabau, kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi.
Asi VaMadzimure vati bato ravo riri kuenderera mberi negadziriro dzekuita musangano nevatsigiri varo paGlamis zvisinei nemaitiro emapurisa aya.
VaMadzimure vati musangano uyu uchange uchidaidzwa kuti People's Peace Rally uye uchapindwa nemutungamiri webato iri VaTsvangirai, avo vachatsanangurira vatsigiri vavo zviri kuitika munyika zvakafanana nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo, pamwe nekubviswa pachigaro kwakaitwa mutauriri wedare reparamende, Va Lovemore Moyo, zvichitevera mutongo wakaturwa nedare repamusoro-soro re Supreme Court wekuti VaMoyo vakanga vasina kusarudzwa nenzira dzinotambirwa kuva mutauriri weparamende.